इन्डोस्कोपी ( Endoscopy) र कोलोनोस्कोपी (Colonoscopy) के हो ? किन गरिन्छ ? Endoscopy and Colonoscopy in Nepali
किन डाक्टरले इन्डोस्कपी ( Endoscopy) र कोलोन्स्कोपी (Colonoscopy) गर्ने सल्लाह दिदछन? इन्डोस्कपी ( Endoscopy) र कोलोन्स्कोपी (Colonoscopy) किन गर्नु
इन्डोस्कोपी ( Endoscopy) र कोलोन्स्कोपी (Colonoscopy) को बारेमा धेरै सुन्नु भएको होला । कती ले यो मेडिकल विधी अपनाएको पनि होलान् । किन डाक्टरले इन्डोस्कोपी ( Endoscopy) र कोलोन्स्कोपी (Colonoscopy) गर्ने सल्लाह दिदछन?
इन्डोस्कोपी( Endoscopy) र कोलोन्स्कोपी (Colonoscopy) भनेको के हो ?
यदि कसैको पेट,आन्द्रा वा शरीरको भित्री अङ्गहरुमा कुनै पानी समस्या आएको छ भने उक्त अङ्गहरुको अवस्था के छ? भनेर चेकजाँच गर्नको लागी इन्डोस्कोपको प्रयोग गरिन्छ ‌ । इन्डोस्कोप एउटा लचिलो प्रकारको दाँया र बायाँ दुवै तर्फ सजिलै मोडिने एक प्रकारको पाइप वा ट्युब हो ।
यो पाइप वा ट्युबको टुप्पोमा क्यामरा र लाइट जडान गरिएको हुन्छ । उक्त क्यामेराले लिएको अङ्गहरुको भिडियोलाई डाक्टरले कलर मोनिटर मार्फत लाइभमा शरीरको भित्रि अङ्गहरुको हेर्ने गर्दछन् ।
उक्त क्यामेरा सहितको ट्यूब मुखबाट भित्र पसाएर पेटको अबस्था, सानो आन्द्रा, खाध्यनली लगायत पेटको माथिल्लो भागको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँच गरिन्छ । यो विधीलाई Upper Endoscopy (माथिल्लो इन्डोस्कोपी)भनिन्छ ।
इन्डोस्कोपी धेरै प्रकारका हुन्छन् । मुखबाट पाइप हालेर गरिने इन्डोस्कोपीले विशेष गरी हाम्रो शरीरको खाध्यनली, पेट र सानो आन्द्राको चेक जाँच गर्दछ ।
त्यसैगरी हाम्रो दिशा आउने भाग वा मलद्वारबाट पाइप छिराएर मलद्वारको भित्री अवस्था, ठुलो आन्द्राको अवस्था चेक जाँच गर्ने विधीलाई कोलोनोस्कोपी भनिन्छ ।
कोलोनोस्कोपीले पेटको तल्लो भागको जाँच गरिन्छ भने इन्डोस्कोपीले पेटको माथिल्लो भागको चेक जाँच गरिन्छ । यी दुबै चेक जाँच गर्ने प्रकिया एउटै हुन् तर यसको नाम र चेक गर्ने शरीरको अङ्ग भने फरक रहेको हुन्छ ।
इन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी किन गर्नुपर्छ ?
पेट सम्बन्धी विराम लाग्यो भने
पेटमा अल्सर भयो भने
दैनिक कब्जियत भयो भने
नियमित डायरिया भयो भने
दिसामा धेरै म्युकसको मात्रा वा फिँज आइरहेमा
लगातार कालो दिसा आइरहेमा
आन्द्राबाट रगत चुहिएमा
दिसामा रगत मिसिएर दिसा कालो आएमा
दिसाबाट नियमित रगत गएमा
मुखबाट रगत निस्केमा
पेट तथा आन्द्रामा ट्युमर पलाएमा
आन्द्राको क्यान्सरको सँका लागेमा
आन्द्रा खुम्चिएर सानो हुँदैछ की छैन ? भनी हेर्नु परेमा
बायोस्पीको लागी आन्द्राको सानो टुक्रो टिस्यु निकाल्नुपरेमा
पेट धेरै दुखिरहने समस्या भएमा
खाना खाने नली सुन्निएमा
आन्द्रामा घाउ भएमा
पेटको क्यान्सर भएमा
अथवा कुनैपनी मुख देखि पेट सम्म भित्री असामान्य प्रकारका परिवर्तनहरु भएमा डाक्टरले इन्डोस्कोपी ( Endoscopy) गर्ने सल्लाह दिनेछन र इन्डोस्कोपी गरेर मात्र शरीरको यि भित्री अङ्गहरुको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ ।
माथिल्लो पेट तथा खाध्य नलीको इन्डोस्कोपी गर्दा ७/८ घन्टा केही नखाइ खालीपेट मा गर्नुपर्ने हुन्छ र ठुलो आन्द्राको कोलोनोस्कोपी गर्दा पनि खाली पेटमा नै गर्नुपर्छ ।
इन्डोस्कोपी ( Endoscopy) गर्दा आन्द्रा पुर्ण रुपमा सफा क्लियर हुनुपर्छ जसका लागी डाक्टरले दिसा लगाउने औषधी दिएको हुन्छन् । दिसा लगाउने औषधीले आन्द्रामा जम्मा भएको सम्पुर्ण फोहोर पदार्थहरु बाहिर निकाल्न मद्द्त गर्दछ ।
डाक्टरले कोलोनोस्कोपी गर्नु अगाडी खाना नखाइ पानी मात्र प्रसस्त मात्रामा पिउने सल्लाह दिन्छन र आन्द्रा पुर्ण रुपमा सफा भएपछी मात्र इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपी गर्ने गर्दछन ।